Tababar Loo Soo Xidhay Gudiga Anshaxa Degmooyinka Gobolka Faafan - Cakaara News
Tababar Loo Soo Xidhay Gudiga Anshaxa Degmooyinka Gobolka Faafan
Jigjiga,(cakaaranews),jumce, 16ka December, 2016. Waxaa lagu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka ee jigjiga tababar muddo shan maal-mood ah u socday gudiyada anshaxa degmooyinka gobolka faafan oo uu soo diyaariyay xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI.
Tababarkaasi oo ay ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadilahaa fahanka anshax marinta gudiga anshaxa degmooyinka ayaa waxaa soo xidhitaankiisii ka hadlay wasiirka adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI marwo Maajida Maxamuud Maxamed oo sharax dheer ka bixisay ahmiyada uu lahaa tababarku. Waxayna sheegtay wasiirku si looga midho dhaliyo qorshayaasha horumarka ee u dajisan dalka iyo deegaanka in la xaqiijinayo nidaamka adeeg bixinta xafiisyada in loo adeegayaashu heleen adeegyada ay dawladu bixiso oo fuhan tayana leh. Wasiirka ayaa tilmaantay doorka ay gudiga anshaxa degmooyinku ku leeyihiin ka midho dhalinta qorshayaasha horumarineed ee u dajisan deegaanka.
Dhankiisa wasiir ku xigeenka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI mudane Xasan Aadan Xasan oo ka hadlay soo xidhitaankii tababarkaasi ayaa ka warbixiyay cashiradii ay qaadanayeen mudadii uu socday tababarku iyo ahmiyada ay uu tababarku lahaa isaga oo ku booriyay in ay cashiradii ay qaateen tababartayaashu marka ay ku noqdaan goobtii shaqo ay sidii loogu talagalay uga midho dhaliyaan.